"သီချင်းများနှင့်အလွမ်းဖြေနေတဲ့ ကျွန်တော်..." | အိမ်လွမ်းသူ...
ဒီသီချင်းလေးတွေကတော့ "အောင်အောင်..."အမြဲလိုလိုနားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေပါ...! တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တွေညစ်လာရင် သီချင်းလေးတွေ နားထောင်လိုက်ရတာ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှု့တွေ ခဏတာလွှင့်ထွက်သွားသလိုခံစားရတယ်...!သူငယ်ချင်းတို့လည်းနားထောင်ကြည့်နော်...!
"အပေါ်က ဝိုင်းဝိုင်း ဆိုထားတဲ့ အချစ်ကိုကိုးကွယ်တော့.."သီချင်းလေးကတော့ အနော့်ချစ်သူကြိုတ်တယ်လေ...! ဒါ့ကြောင့် သီးခံနော်...
"ဒီသီချင်းလေးကတော့ အားလုံးအိမ်ကိုလွမ်းနေတာဆိုတော့ အမှတ်တရလေးပေါ့...!ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း နားထောင်သွားပါနော် *** အိမ်လွမ်းသူ*** ရောက် အမှတ်တရပေါ့..."
"ကော်ဖီသောက်တိုင်း တကယ်ပဲ အချစ်ကို လွမ်းတယ်ဗျာ..." အမြဲတမ်း လွမ်းနေတာ...ဟဲ...ဟဲ..
"ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ အချိန်တိုင်းဟာ အခုလိုဝေးနေတဲ့အခိုက်မှာ အမှတ်တရရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ဖြစ်နေမှာဆိုတာ အားလုံးလည်း သိမှာပါနော်..."ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာလေးတွေပေါ့...ချစ်သူကို ခွဲနေရတဲ့သူတွေ R ဇာနည် သီချင်းလေးကိုနားထောင်သွားနော်...!
"ဒီသီချင်းလေးကတော့ အနော့်ကောင်မလေးအရမ်းကြိုက်လို့ တင်ပေးထားတာ အနော်လည်းကြိုက်တယ်...!ဆိုထားလေးလည်းကောင်းတယ် ....! သူငယ်ချင်းတို့လည်းနားထောင်နော်...!
"အဝေးရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေသီချင်းလေးပါ...နားထောင်သွားပါနော်..."
3 Response to "သီချင်းများနှင့်အလွမ်းဖြေနေတဲ့ ကျွန်တော်..."
ငါ့သယ်ရင်းကြီး လွမ်းနေတာလားကွ......အဆင်ပြေရဲ့လား.....ဘာတွေလုပ်နေလဲ......ငါလည်း သီချင်းတွေ နားထောင်သွားပါတယ်ကွာ.....လွမ်းတာ...
ရှယ်လေးတွေပဲ ညီလေးရေ... ကိုယ့်ညီနဲ့အကို
အကြိုက်ချင်းလာတူနေပြီ... ရင်ဂိုရဲ့ သီချင်း က
လို့အမိမြေနဲ့ ဝေးနေတဲ့သူတွေအတွက် တော့ တကယ်